Burcadbadeeda Soomaaliya oo afduubtay markab shixnada qaada oo laga leeyahay Hindiya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaBurcadbadeeda Soomaaliya oo afduubtay markab shixnada qaada oo laga leeyahay Hindiya
April 3, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Burcadbadeeda Soomaaliya oo afduubtay markab shixnada qaada oo laga leeyahay Hidiya. [Xigashada Sawirka: AFP]
Garoowe-(Puntland Mirror) Burcadbadeeda Soomaaliya ayaa afduubtay markab shixnada qaada oo laga leeyahay Hnidiya oo ay saarnaayeen 11 shaqaale ah, sida uu ku waramay taleefishinka Hindiya laga leeyahay oo la dhaho Times Now TV.
Dhacdada ayaa dhacday Sabtidii lasoo dhaafay, waxaana markabku waday shixnad uu ka keenay Dubai uuna u waday magaalo xeebeedka Mukala ee dalka Yeman, markii ay afduubteen burcadbadeedu.
Kabtanka markabka ayaa ku wargeliyay haayadaha Dubai in markabka la afduubtay, Wasaaradda Arrimaha Dibada ayaa sidoo kale cadaysay, sida uu ku waramay Times Now TV.
Afduubashada ayaa timid wax ka yar hal bil kadib markii burcadbadeeda Soomaaliya ay qabsadeen markab saliida qaada oo la dhaho Aris 13 oo ay saarnaayeen sided shaqaale ah oo u dhashay Sri Lanka, balse ay sii daayeen kadib shan beri oo afduubasho ah.
March 14, 2017 Dablay looga shaki qabo burcadbadeed Soomaali ah oo markab ganacsi afduubtay markii kowaad muddo shan sanno ah
Baarlamaanka Puntland oo isku diyaarinaya doorashada guddoomiyaha
Garoowe-(Puntland Mirror) Kadib markii golaha baarlamaanka Puntland ay Khamiistii xilka ka qaadeen guddoomiyihoodii, ayaa hadda waxaa socda diyaargarowga doorashada xigta oo la filayo in ay dhacdo dabayaaqada asbuucaan. Labo xildhibaan ayaa la filayaa in ay [...]